NOOCYO KA MID AH REEXAANTA: MAGACYADA IYO SAWIRRADA - DHIRTA DAWOOYINKA
Maydhku waa warshad aad u qiimo badan oo faa'iido leh oo loo adeegsaday nin wakhtiyadii hore. Dunida casriga ah waxaa laga rabaa daawada, karinta, cadarka. Maqaalku wuxuu bixiyaa macluumaad ku saabsan noocyada noocyada kala duwan ee la heli karo, iyo macluumaad kooban oo ku saabsan qaar ka mid ah ayaa la bixiyaa.
Ma taqaanaa? Sida laga soo xigtay database-ka The Plant List, caleemaha Nolosha waxaa iska leh qoyska Luminous oo ka kooban 42 noocyada iyo Beelaha.
Magacyada kale ee calaamadahan - malab, malab, malab, melissa. Inkasta oo aan la xiriirin caleenta dufanka, laakiin waxay iska leedahay qoys isku mid ah. Waxay leedahay dhadhan raaxo leh oo liin liin. Wuxuu ka imanayaa koonfurta Yurub, Mediterranean.
Waxaa loo arkaa mid ka mid ah noocyada dhirta ugu qiimaha badan. Waxaa lagu qiimeeyaa dhadhanka dhadhanka sare leh iyo sifooyinka daawooyinka, waxaa ku jira xaddi badan oo fitamiin C, carotene, saliidaha lagama maarmaanka ah. Qarniyo badan ayaa loo beeray sidii dhir udgoon. Waa wakhti, qaxwaha xagaaga, miraha bislaadaan dayrta.
Isaga oo ka hadlaya maro liin, waxaad iska indha tiri kartaa sharaxaadda geedka. Dhererkoodu wuxuu ka yaryahay 30 cm ilaa 1 m 20 cm. Maadada waa ciriiri, jeexjeexan, tetrahedral, oo leh pubescence oo leh timo gaaban. Petiolate, caleemo qulqulo ah, cagaar dhalaalaya, cagaaran oo ku taalla, waxay leedahay toon gacmaha. Caleemaha gaaban, ubax-buluug ama ubax-casaan (laga bilaabo 6 ilaa 12) waxay ku yaalaan barxadaha caleenta sare. Miro badan, miro madow oo iftiin leh ayaa ku habboon beereedka 2-3 sano.
Waa muhiim! Tani waa warshad jilicsan ee jiilaalka-adag, laakiin si looga fogaado barafoobidda xilliga jiilaalka, waxaa fiican in mulch leh peat.
Nolol - haddii kale mint, mada madaarka, plektranthus ama sporotsvetnik. Waxa kale oo uu ka mid yahay wakiilada Lamous, laakiin maaha mid ka mid ah caleenta mugdiga ah. Waa dhirta sanadlaha ah ama gaaban ee dabiiciga ah. Dabeecadda, waxay ku koraan cimilada iyo cimilada. Daryeelka haboon wuxuu ku noolaan karaa daaqada ilaa 5 sano.
Waa geed, cufan ama caws. Caleemaha roodhida naasku waxay ka kooban tahay saliid asturan oo ah walxo adag, kaas oo siinaya caraf udgoon. Isticmaalidda loogu talagalay qurxinta, daawooyinka, karinta (sida dhirta cagaarka iyo khudradda cagaaran), waxaa la aaminsan yahay in carafka dhirta ay cayayaanka u noqon karaan cayayaanka sida baalalka, kaneecada, iwm.
Wuxuu ka koraa 30 illaa 150 cm Tetrahedral stems wuxuu yeelan karaa pubescence ama wuxuu noqon karaa mid dhali kara. Caleemaha waa elliptical, dhoobo, oo qaabaysan, qaabaysan, si iskeed ah. Ubaxyo yaryar oo leh caleemo caleemo ah, ayaa lagu ururiyey inflorescences, dallad. Miro ayaa ka kooban 4 nuts.
Dhirta yaryar ee cagaarka ah waa noocyo kala duwan oo lebbiska ah, laakiin, si ka duwan, waxay ka kooban tahay tiro badan oo ah menthol. Waxay leedahay ur aan fiicnayn, aad u kacsan, u adkaysata iyo iska caabida dheeraadka ah ee cayayaanka iyo cudurada. Kala duwan tani waxay leedahay dareen adag jiilaalka wanaagsan.
Waxay leedahay dalab ballaadhan oo laga soo qaato - laga soo bilaabo kiknoolojiga si loo kariyo, loo isticmaalo sida anti-bararka, gumeysiga ee daaweynta boronkiitada, hagaajinaysaa dheefshiidka. Miisaanka nambarka waxaa loo isticmaalaa sida bahal, iyo xitaa samaynta mojito.
Gaarayaa 30 illaa 65 cm oo dherer ah (iyadoo ku xiran aagga iftiinka). Goobo waa madow, toosan, awood leh. Caleemaha midabka cagaaran madow waxay u koraan 5-7 cm dhererka iyo 1.5-2 cm oo ballaaran, muuqaal qotoma ah, wax yar qalloocan. Ubaxku wuxuu dhacaa bartamihii July - horraantii Agoosto. Ubaxyo yaryar, guduud ah ayaa lagu ururiyaa inflorescences.
Ma taqaanaa? Magaca caleemaha mugdiga waxaa laga soo qaatay mulkiilaha Menty (Minty, Minfi). Sida uu sheegay khudbadda Giriigta, waxay ahayd lafa ahaantii ilaahii hudheelka ee Hades iyo gabadhiisii ​​Persephone ee cawska udgoon.
Warshad sida lebbiska ayaa ah nooca ugu caansan uguna badan ee lebbiska. Tani waa natiijada bacriminta ee cagaarka iyo biyaha. Waxa kale oo loo isticmaalaa karinta, farmashiyada iyo daawada. Waa xayawaan malab oo qiimo leh. Dabeecadda ma koraan. Waxay leedahay dhadhan guban ee caleemo, taas oo uu helay magaca. Waxaa loo adeegsadaa daawooyinka dadweynaha iyo farmasiyada casriga ah. Iska ilaali dadka qaba cadaadiska dhiiga ee hoos u dhaca iyo xididdada xakamaynta.
Gawaarida dhirta waxaa loola jeedaa dhirta cawska, iyadoo sharaxeedu yahay mid sahlan. Hollow, ciriiri, jeexjeexan oo afkoda koraya min 30 cm ilaa 1 m in height. Waxay ku dhacdaa qaawan iyo qoryaha (timaha dhif iyo gaaban, cadaadiya).
Dhexdhexaadinta xayawaanka ayaa ka soo baxa ovoid. Goobuhu waa gaaban yihiin. Saldhigga wadnaha-qaabaysan, geeska fiiqan. Iftiin madow ama casaan cad oo yar yar ayaa lagu ururiyaa nus-boodhka on top of asliga ah. Bilowga ubaxu wuxuu dhacaa dhamaadka Juun wuxuuna socdaa ilaa Sebtembar. Miraha ka kooban 4 nuts ayaa dhif ah la sameeyay.
Haddii aan ka hadleyno waxa naasku yahay, marka laga reebo lebpermint oo leh astaamo isku mid ah, midabku waa mid aad ugu dhow ujeedada qaybinta iyo isticmaalka. Waxaa sidoo kale loo yaqaannaa xayawaan, kolosovidnoy, Jarmal, beerta, guga, jajab.
Waxaa ku jira linalool iyo carvone, taas oo siineysa ur adag iyo dhadhan gaar ah, laakiin waxaa ku jira ku dhowaad lahayn menthol, sidaas darteed noocan ah ma laha dhadhan qabow. Cuncun giigsan leh saliida muhiimka ah waxaa lagu qiimeeyaa ka sarreysa saliida qallalan. Marka lagu daro daawada iyo karinta, waxaa loo isticmaalaa saabuun, tubaakada iyo sayniska macmacaanka.
Wuxuu cadeeyaa dhirta cawska. Dhererka - 80-90 cm. Tirada badan ayaa soo baxa, waxay dhali kartaa. Caleemaha waxay ka soo horjeedaan cadowgooda, waxay leeyihiin qaab muuqaal ah, waa la duuduubay oo qallafsanaa, jejebay qarkood. Xagga sare ayaa dhasha, laga soo bilaabo hoosta waxaa jira timo dhif ah oo ku xeeran xididka. Dhaqdhaqaaqyo, ubaxyo, dhirbaaxo aad u gaaban, ayaa lagu soo ururiyaa inflorescences waxayna ku yaalaan dhamaadka asliga ah. Waxay ku duugmaysaa laga bilaabo Juun ilaa Sebtembar. Seeds u bislaadaan bisha Oktoobar.
Waa muhiim! Wixii keydinta cufan, bacaha ama bacaha dusha ama bacaha waa in si fiican loo dhigaa meel qabow, mugdi ah, oo qallalan.
Kintirka Kuuriya, oo sidoo kale loo yaqaan polygrid lakala duubay, ama laydhka Tibetan, ayaa sidoo kale iska leh qoyska Qeybta, laakiin maaha caanaha. Wadanka - Waqooyiga Aasiya. Waxaa lagu koray dhirta orodka ah, dhirta iyo daawooyinka.
Waxay leedahay guryaha tonic iyo anti-gabowga, waxay cadaadisaa cadaadiska. Waxaa ku jira qayb ka mid ah daroogooyinka oo hagaajinaya habka dhiigga loo isticmaalo cudurada habka neefsiga, si looga hortago cudurka beerka. Waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah noocyada ugu dambeeyey ee naadiga ah ee saameyn jilicsan oo muddo dheer soconaya habka difaaca jirka. Sababtan awgeed, Bariga, wuxuu ku raaxaystaa ammaanta qof ka soo horjeeda ee ginseng. Koontada Koonfureed ee Koonfureed waxay leedahay guryaha bakteeriyada.
Tani waa geedo daa'in ah. Wuxuu koraa illaa 1 m. Dhicis waa ciriiri, tetrahedral. Caleemaha petiole waa 10 cm dheer iyo oval qaab muuqaal ah iyo hindiseen on gees ah. Ubaxyada tubbada ah ee buluug-guduud ama midab cad ayaa lagu soo ururiyaa muraayadaha inflorescences. Bloom ee July-September. Waxay ufiican tahay sida midabka, dabaysha, iyo oregano isla waqtigaas. Bisaylka miraha wuxuu dhacaa bisha Sebtembar. Noocyada waa jiilaalka-adag oo ku filan, heerkulku wuxuu hoos udhaca ilaa -15 ° C.
Budra ivyhsevidy, ama naaskii eey, Ninka riwaayad ah - Tani waa dakhliyo badan, oo aad u caraf badan, dhirta xashiishadda ah, oo aan ka tirsanayn caleenta dufanka, laakiin sidoo kale ka tirsan qoyska Qeybta. Waxay ku koraan Eurasia, goobo xasaasi ah. Dhadhanka waa qadhaadh, gubasho. Waxay loola jeedaa dhirta malabyada, daawooyinka (oo loo isticmaalo sida anti-bararka, choleretic, bogsashada wakiilka), oo loo isticmaalo soo saaridda cabitaannada tonic.
Waxay ku koraan wax ka sarreeya 40cm, Cagaha oo uurjiif ah, dharbaaxo ama xayawaan leh timo gaaban, laga bilaabo 20 illaa 50 cm dheer Caleemaha waa tiro badan, xidid. Caleemaha leh petioles dheer (caleemaha hoose ee ku yaala, inta dheer ee petiole) waxay leeyihiin qaab isku mid ah ama midab leh, oo ku yaalla soo horjeeda. Lagu soo ururiyey 3-4 ubax yar yar waxay leeyihiin midab madow ama lilac-buluug. Bloom ilaa xagaaga bartamihii. Miraha waa buni, ilaa 2 mm dhererka.
Ma taqaanaa? Warshad jajab ah ayaa loo isticmaali jiray daawooyinka Shiinaha dhowr kun oo sano ah sida anti-bararka, carminative, choleretic, diaphoretic, deodorizing, iyo suuxdinta deegaanka, iyo saliida gawaarida waxaa lagu talinayaa in lagu dhaqo indhaha.
Catnip (Celine Celine) ayaa iska leh Kotovnik caan ah, ma aha mooyee, laakiin sidoo kale isla qoys. Waxay leedahay qufac xoog leh oo qallafsan oo qallafsan oo soo jiidata jilicsan (thanks to Nepetalactone, saliid lagama maarmaan ah). Waxay dooranaysaa dhalada kaynta, suuqyo banaan, meelo dillaacsan, jilicsan, wadooyinka.
Badanaa waxaa lagu beeray aagagga caan ku dhow, maadaama ay tahay dhir qiimo leh. Waxa kale oo loo isticmaalaa dhadhanka, saabuun samaynta, wax soo saarka macmacaanka iyo, dabcan, daawada. Dadku waxay isticmaalaan cudurada mareenka caloosha iyo mindhicirrada, madax xanuun, cudurrada maqaarka, jeexis, daal. Tani waa wakhti dheer oo ah wakiil waqti dheer ee flora. Waxay ka koraysaa 40 cm ilaa 1 m dhererka. Xididdadu waa xayawaan, leexsan. Goobo ayaa kacsan, xoog leh. Caleenta pubescent, saddex-geesood, oogada oo leh cirrid weyn oo dhinac ah iyo caarad fiiqan, waxay leeyihiin saldhig wadnaha ah. Ubax cad-caddaan ah (dhar guduudan ama midab leh oo ku yaalla dibinta hoose) ayaa laga soo ururiyaa nus-dalladaha adag ee dhamaadka caleemaha, ubaxyada bisha Juun iyo Julaay. Midhaha oval oo siman oo midabkeedu yahay midab khafiif ah - bartamaha xagaaga.
Goobta beerta, ama cows, oo loo yaqaanno duurjoogta - Wakiil ka mid ah jinsiga. Aagga kobcinta - Yurub, Bartamaha iyo Galbeedka Aasiya, Caucasus, qayb ahaan Hindiya iyo Nepal. Waxay doorbidayaa bangiyada, wabiyada kale ee biyaha, dhulka qoyan, beeraha, qorraxda. Uma baahnid daryeel.
Saliidaha ugu muhiimsan ee leh urta urta iyo dhadhanka qadhaadhku wuxuu ka kooban yahay menthol iyo terpenes kala duwan. Waxaa la tijaabiyey tijaabiyey in la neefsanayo carafta duxda hawada inta lagu jiro maalintii waxay yaraynaysaa qaadashada kalooriga 1,800 kcal / maalin. Ku darso cunto karinta, daawada (daaweynta gariir, giltritis, haddii aysidhka la kordhiyo, cudurka beerka). Budada waxaa loo isticmaalaa sidii antiemetic.
Cawska xayawaanka ah. Waxaa laga yaabaa 15, iyo 100 cm oo dherer ah. Lafaha jilicsan. Goobaha lafdhabarta waa qumman yihiin, hase yeeshee inta badan waa ay u sujuudayaan. Caleemaha waxay noqon kartaa mid qoyan, midab-duub ama qoton-dheer. Tilmaameedka sare. Ubaxa lilac ama midabka lilac-casaan on pedicels waxaa lagu daraa cirridka been abuurka ah. Waxay kala-baxdaa bilaha Juun ilaa Oktoobar. Miro ayaa ka kooban 4 eremov siman. Bisaylkiisa wuxuu dhacaa bisha Agoosto - Oktoobar.
Cuntada yaryar waa mid ka mid ah magacyada ciriiriga ah ee kor ku xusan.
Caleen yar yar
Waxaa laga helaa Afrika, Asia, ku dhowaad dhammaan Yurubta. Aagga codsigu waa isku mid sida xubnaha kale ee caanaha, oo lagu daray - soosaarka cagaarka cagaaran. Waxay leedahay caraf udgoon. Qeybta ugu muhiimsan ee saliidda muhiimka ah waa pulegon, sidoo kale waxaa ku jira carvacrol, menthol, iwm.
Caleemaha caleenta ah waa qani ku ah ascorbic acid. Waxay leedahay caabbi barafeed wanaagsan. Ku adkaynta qoyaanka iyo iftiinka. Faafin by rhizome.
Waa muhiim! Si aad u isticmaasho geedka caajiska ah ee basbaaska leh, caleen tan waa in la soo ururiyaa ka hor ubaxyada oo marmar ah muddadan.
Muuqaal jilicsan, ilaa 75 cm oo dheer. Tetrahedral afkoda - xooggan, wax yar uun, oo la jarjaray. Rootiyada. Tilmaameed, caleemo qoyan oo caleenta madoow ah, lanceolate ama ovate-oblong, waxay leeyihiin cufan dusha sare leh iyo geeso jug leh. Ubaxyo yaryar ayaa lagu dhejiyaa jilbaha, ubaxyada casaanka ah, waxay leeyihiin midabka lilac ama midab leh. Waxay ku jirtaa bilaha Luuliyo ilaa Agoosto, oo dhirta miraha laga beeraa Agoosto-Sebtember.
Ginger ama dhuuban - Rooti ah geedo badan. In dabiiciga ah, laga helo dhulka Masar, Koonfur-bari Yurub iyo Galbeedka Aasiya. Ma laha saameyn talaagada ah. On talo ah ee daawada dhaqameed, waxaa loo isticmaalaa for caabuqa ee marinka mindhicirka. Waxaa loo isticmaalaa, gaar ahaan, si loola dagaallamo sarrifka, sida sedative.
Tetrahedral, toosan, jeexjeexan afkoda 30 cm ilaa 1 m sare leeyihiin caleenta cufan. Xididdada waa mid siman, si fiican loo horumariyo. Ka tago on petioles gaaban, 8 cm × 2 cm, tilmaamay tilmaamay dhamaadka. Foom - qashin-qoyan. Sababtoo ah midabka huruudka ah-cagaaran, midabka cawska ayaa sidoo kale lagu koray sidii warshad ornamental ah. Ubaxyo yaryar, ayaa lagu soo ururiyey dhoobada cirridka ah, waxay sameeyaan inflorescences-kor u eg oo midabka casaan ah ama midab buluug ah. Bloom laga bilaabo Juun ilaa Oktoobar. Miraha dhif ah ayaa la sameeyay.
Suugo shukulaato ah
Warshad Foosto ah - isbeddelka asalka ee asalka ah. Waxay si dhakhso ah u faaftaa waxayna ku koreysaa meelaha qoyan. Waxay diyaariyaan ciidda iftiinka. Aad u kacsan. Wuxuu u baahan yahay dayactir yar. Waxay leedahay dhadhan wanaagsan oo caraf udgoon leh. Adkeysiga cayayaanka, cudurada, dhaxan iftiinka. Iyada oo iftiiminta habboon, caleenta waa midabka midab leh miro qurub oo mugdi ah. Waxaa la koray sida warshad ornamental ah, sida basbaas leh tiro ballaaran oo tayo wanaagsan leh, oo loo isticmaalo warshadaha macmacaanka, daawada.
Caleemaha cufan leh waxay leeyihiin qaab ka mid ah baadiyaha udubdhexaadka ah ilaa 40 cm ee dhererka ah ee rhizome waa branchy xoog leh. Joogto waa toos, tetrahedral, adkaysi u. Caleemaha caleenta ah ayaa wareegsan, oo leh xariiqyo, waxay leeyihiin caarad fiiqan, oo la mid ah caleemaha roodhida, koraaga geeska, crosswise. Ubaxyo yaryar ayaa hoos u dhiga xayndaabyada iyo ku yaalla barxadda caleemaha. Ubaxku wuxuu dhacaa bilawga bisha ogosto.
Kala aag midab
Marsh madoow, ama dhuxul, waxaa loola jeedaa dhirta dilka ah ee caanaha. Yurub dhexdeeda, way ku badan tahay meel kasta, waxaa kale oo laga heli karaa dhulalka Caucasus, Turkiga, Bariga Aasiya iyo Waqooyiga Afrika. 95% saliidda lagama maarmaanka ah waxay ka kooban tahay pulegon, sidoo kale waxaa ku jira menthol, limonene. Tani waxay sababtay, waxaa loo isticmaalaa dhadhanka, macmacaanka, waxsoosaarka caanaha.
Daawo dhaqameedku wuxuu siinayaa warshadan antiseptic, xayawaan, bogsashada guryaha nabarka waxayna ku talineysaa daaweynta xiiqda xiiqda, neefta, boogaha.
Heerkulka naasuhu wuxuu ka bilaabmaa 20 ilaa 60 cm. Petiolate waxay ka baxdaa qiyaastii 1 cm oo dherer ah, qiiqa salka ah ee saldhigga, elliptik ama qashin-dheer. Mauve ubax leh tubun oo midab cad, abuuray siddooyin cufan ee qaabka ugu dhow. Bloom bartamihii - xagaaga dambe. Miro, bunni, miro cuncun ayaa kiciya xagaaga dambe xagaaga - dayrta xilliga hore.
Kuwani waa noocyo yar oo ka mid ah isku-dar ah sawirro iyo sharraxaad walboo kasta. Sida aad arki karto, cawska quruxda badani wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo waxtar leh, qof walbana wuxuu dooran karaa midka ku habboon baahidiisa.